Dhulka (Af Ingiriis : earth, ) waa meereha sadexaad ee qoraxda u dhow ee Bahda Midaysay Qoraxdu. Waa meeraha ugu muga iyo miisaanka weeyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weeyn sideedda meere eeBahda Qoraxdu Midaysay. Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluuga.
6 Qoraalol la mid ah
Isku-xidhka curiyeyaashan waxay noqonayaan 99.6% qolofta sare ee dhulka,--> tirada yar ee kale waa hawooyin iyo neefo ku dhex jira. Guud ahaan cufka dunidu waa qiyaas ahaan 5.98 ×10 24 kg, kuwaas oo ka kooban inta ugu badan birta Aayron (32.1%), Ogsajiin (30.1%), Silikoon (15.1%), Magniisiyaam (13.9%), Salfar (2.9%), Nikel (1.8%), Kaalshiyaam(1.5%), iyo Alumiiniyaam oo ah (1.4%); inta soo hadhay oo ah 1.2% waxay ka kooban yihiin isku dhis curiyeyaal kale. Dhinaca kale, maadaama cufka gudaha dhulku aad u badan yahay waxaa la aaminsan yahay in badhtanka dhulku ka sameeysan yahay 88.8% birta Aayron (iron), iyo xoogaa yar oo Nikel 5.8%, Salfar (4.5%), iyo 1% curiyeyaal kale ah.
Qoraalol la mid ah
↑ NOAA – Ocean
↑ J. Pearsall, The New Oxford Dictionary of English, Earth, Oxford University Press
↑ The 'Highest' Spot on Earth, Npr.org
↑ Ptolemy's Almagest, Ptolemy, G. J. Toomer, Princeton University Press 1998
↑ IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes, International Astronomical Union, 2006
↑ Working Group on Extrasolar Planets (WGESP) of the International Astronomical Union
↑ NASA Staff Kepler: A Search For Habitable Planets – Kepler-20e
↑ Johnson Michele, NASA Discovers First Earth-size Planets Beyond Our Solar System, NASA, 20 December 2011
↑ Hand Eric Kepler discovers first Earth-sized exoplanets 20 December 2011
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhul&oldid=234024"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Abriil 2022, marka ee eheed 08:06.